Palestina: Ny Fisondrotana Kilasy any Gaza · Global Voices teny Malagasy
Palestina: Ny Fisondrotana Kilasy any Gaza
Voadika ny 04 Aogositra 2009 8:34 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, عربي, English
Ny tawjihi dia ny fanadinana ankapobeny aorian'ny dingana faharoa any amin'ny faritr'i Gaza, sisiny andrefan'i Jordana, ary mamaritra ny safidin'ny mpianatra iray momba izay anjerimanontolo sy ny sampana horaisiny. Tamin'ity taona ity, ny fiatrehana miaraka ny fanadinana any amin'ny sisiny andrefana sy ao Gaza dia noraisina ho toy ny taratry ny firaisam-pirenena sahady. Ao anatin'ity hafatra ity, mandre isika ny fanehoan-kevitr'ireo mpitoraka blaogy avy ao Gaza momba ny vokatry ny tawjihi.
Amin'ny ankapobeny dia antsasany ihany amin'ireo mpianatra miatrika ny tawjihi amin'izao fotoana no raisina. Navoaka tamin'ny fampahalalam-baovao ny vokatry ny Tawjihi, ary dia nikarakarana lanonam-pankalazam- bahoaka ho an'ireo voaray. Isan-taona izay mahazo ny isa ambony indrindra – tamin'ity taona ity dia lasan'i Tala Al-Battia avy any Nablus ny anaram-boninahitra – dia tonga olo-malaza. Jawwal, ilay orinasan-tserasera amin'ny finday Palestiniana, no “mpanohana voalohany” ny fanadinana tawjihi, ary tamin'ity taona ity dia nampanao fifaninanana nantsoina hoe “Vinanio ny vokatra azonao amin'ny Tawjihi ary mahazoa Dolara an'arivony [Guess Your Tawjihi Result and Win Thousands of Dollars]”. Fa kosa, ho an'ny fianakavian'ireo tanora maro maty nandritra ny fanafihana tao Gaza tsy ela akory izay tamin'ity taona ity, dia fotoanan'ny alaheloho lalina izany – ary ho fankasitrahana ireo mpianatra ireo, ny governemanta Hamas dia nanolotra mari-boninahitra [sertifika]tawjihi.
Ao amin'ny Electronic Intifada, Rami Almeghari dia nitatitra ny fikirizan'ireo mpianatra ao Gaza amin'ny fianarana mba hiatrika ny fanadinana, tsy ijeren'izy ireo izay toe-draharaha iainana. Mpianatra iray, Abeer Abu Shawish, no nilaza taminy hoe:
“Talohan'ny ady tamin'ny faramparan'ny Desambra 2008, niomana fatratra hiatrika ny tawjihi aho. Indray andro, tao anatin'ny ady indrindra, nandre daroka baomba aho tsy lavitra ahy tany amin'ny 11:00 alina tany. Na izany aza, naka aina nifoka rivotra tsara aho ary nanohy ny fianarako. Na dia tohina mafy amin'ny fanafihana ataon'ny Israeliana avy any an'habakabaka, an-dranomasina sy an-tanety aza aho, dia hoy aho hoe, tsy maintsy tafita aho mba hiadiako amin'ny fananiham-bohitra ataon'ny Israeliana ary amin'ny fombako manokana, ny fanabeazana!”
Mazava be ny rarin-tsaina nateraky ny fanadinana ao anatina hafatra iray nalefan'ny mpianatra iray, Ghost of Palestine , nitondra ny lohateny hoe “Nivoaka ny valim-panadinana”:
Tsy asiana reeeeeeeeesaka!
Mutasharrid dia isan'ireo voaray, tamin'ny isa 91.9:
أمّي ، أبي ، دربكة الأقدام على موسيقى وأغاني لا نحفظها ، أصوات ضحكاتهم الغجريّة ، زغاريد الفلاحات بكل ما اوتين من فرح ، همهمة جدتي بأدعيتها القدسيّة ، الفرح الوحشيّ …
Ny reniko, ny raiko, ireo gadom-pamindràna amin'ny mozika sy ireo hira izay tsy tsaroanay intsony, ny feon'ny tokelak'izy ireo toy ny an'ireny mpifindrafindra toerana ireny [gypsy laughs], ny horakorak'ireo vehivavy tantsaha miaraka amin'izay mety ho hasambarana azony navondrona, ireo ranom-bavaky ny renibeko any Jerosalema, hasambarana tsy misy fatra…
Hazem milaza fa:
أتقدم بالتهنئة الممزوجة بعبير التقدير والاحترام لطلبة الثانوية العامة بمناسبة نجاحهم سائلاً المولى عز وجل ان يوفقهم فى حياتهم العلمية والعملية .
ونقول رغم الحصار والدمار رغم الحرب الاخيرة على غزة الا ان النسب مبشرة والنتائج افضل من نتائج العام الماضى
Te-hanolotra ny fiarahabako, miaraka amin'ny fankatelemana sy ny fanajàna, ho an'ireo mpianatry ny ambaratonga faharoa aho amin'izao nahafahan'izy ireo ny fanadinana izao, ary mangataka amin'ilay Tsy Toha mba ho tafita izy ireo amin'ny fianarany ho avy sy ny asany. Azontsika ambara fa na dia teo aza ny fahirano sy ny fandravàna, na teo aza ny ady farany teo tao Gaza, ny tahan'ireo afa-panadinana dia niakatra ary tsara ny vokatra raha mitaha amin'ireo tamin'ny taona lasa
Tanatina hafatra iraisana, Nazek Abu Rahma sy Hanadi Al Qawasmi dia manoratra hoe:
هذه بعض مشاهد فرحة فلسطين بطلابها المتفوقين، فلسطين المعروفة بتحصيل أبنائها الأكاديمي العالي مقارنة بأقرانها من العرب، الذين عرفوا أن علماً يحصلونه هنا وهناك يُعلي رصيد نضالهم. حتى الطلاب الأسرى منهم (1821 أسير) ما زالوا حتى اللحظة يطالبون سلطات الاحتلال بحقهم في التقدم لامتحان الثانوية من وراء القضبان. مشاهد هنا وهناك، بعضها يعكس مشاعر ممتزجة في قلوب الفلسطينيين مزينة بأمل أن تتحول الوحدة التربوية إلى وحدةٍ سياسيةٍ .
Indreto tranga vitsivitsy amin'ny hafaliana tao Palestina ho an'ireo mpianany mendrika. Fantatra amin'ny haavon'ny vokatra azon'ireo mpianatra ao aminy i Palestina, ampitahaina amin'ireo firenena Arabo hafa. Fantatr'izy ireo fa ny fahalalàna azony amin'izay toerana rehetra lalovan'izy ireo dia singa mandrafitra ny fanoherany. Na dia ireo mpianatra (1,821) voafonja aza dia mitohy mitaky amin'ireo hery mpanani-bohitra [Israely] ny zon'izy ireo hiatrika ny fanadinana na dia ho any am-ponja aza no hanaovana azy. Tranga tetsy sy teroa, ny sasany maneho ny hetaheta miloatra avy ao am-pon'ireo Palestiniana maro, mitondra fanantenana fa hoe ity firaisana amin'ny lafiny fampianarana ity anie dia mba hitondra amin'ny firaisana ara-politika koa.